Randomize gị WordPress akụkọ mfe | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 21, 2013 Douglas Karr
M na-achọ ngwa mgbakwunye ma ọ bụ ụfọdụ koodu ka ịkpọgharịa isi na ebe obibi anyị na DK New Media inwe obi uto ma dozie ulo obibi ntakịrị. Nsogbu bụ na enwere m isiokwu etinyere nke nwere mpaghara ụfọdụ maka akara mkpado na nkọwa nke saịtị ahụ, ọ nweghịkwa m ịchọrọ iwepụ ya maka mgbanwe a.
Iji mee nke a site na iji mgbakwunye na isi okwu ga-achọ iji ihe dị egwu Advanced Custom Fields ngwa mgbakwunye na Repeater Field Add-na - nke a bụ otu anyị ga - esi eme ya maka ndị ahịa. Maka saịtị anyị, agbanyeghị, anyị na-ewere ụzọ mkpirisi na obere snippet koodu a na-arụkwa ọrụ nke ọma!
N'ụzọ bụ isi, ị na-abanye dị ka ọtụtụ isi okwu n'ọhịa ma kewaa ha na ụfọdụ agwa (M na-eji akara ngosi "|"). Mgbe ahụ ị nwere ike iji ọrụ PHP gbawara nke na-etinye isi akụkọ niile n'usoro wee jiri ọrụ shuffle PHP gbanwee usoro nke usoro ahụ, wee gosipụta nsonaazụ mbụ. Only gosiputara nsonaazụ nke mbụ… otu a ma ọ bụrụ naanị na ị nwere otu nsonaazụ ọ ka ga-egosipụta nke ọma!
N'ime isiokwu anyị ebe egosiri isi okwu, anyị na-edochi ederede ederede na koodu ndị a:
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe fancy, ị nwere ike ịgafe a dị ka a omenala gbanwere na nchịkọta Google ma nwalee isi okwu nke kacha mma!
Tags: agbawaPHPhaziebugharia isi okwuịkpọgharịaịkpọgharịa isiokwuisiokwu mkpado
Rị elu nke Ahịa Ahịa, na Uru Ndị Ahịa